Mayelana NATHI - Yuyao Jera Line Fitting Co., Ltd.
I-YUYAO JERA LINE FITTING CO., LTD yifektri esungulwe ngo-2012, ekhiqiza isisombululo esiphelele semikhiqizo yokuthunyelwa kwentambo ye-fiber optic ngobuchwepheshe be-FTTX ne-FTTH kuzicelo zangaphandle, ezingaphansi komhlaba. Ifektri yaseJera inengqalasizinda ebanzi yokukhiqiza izingxenye zekhebula le-fiber optic zokwakha amanethiwekhi wezokuxhumana ngocingo.
Injongo yethu ukwanelisa izimfuno zemakethe ngokwakhiwa kobuchwepheshe emikhakheni ehlobene nebhizinisi ezingeni eliphakeme ngokusebenzisa izinto ezintsha nokwazi ukuthi kanjani.
Umbono wethu ukufeza ukuthi kungenzeka yini ukwenziwa kabusha ngokukhiqiza inqwaba yemikhiqizo enokwethenjelwa nokwakhiwa kwamanethiwekhi ezokuxhumana ngocingo.
Ibanga lethu lomkhiqizo eliyinhloko lifaka:
● Izintambo ze-Fibre optic FTTH ne-ADSS
● Izibopho zokwehla ze-FTTH, izibiyeli zocingo ze-FTTH.
● Izibopho zezintambo ze-fiber optic kanye nabakaki bezintambo ze-ADSS ne-Figure 8.
● Amabhokisi wokuqedwa kwe-fiber optic, i-FTB
● Ukuvalwa kwe-fiber optic splice. I-FOSC
● I-Helical wire guy ibambelela izintambo ze-ADSS ne-Figure 8 messenger.
● Kuhlobene nemikhiqizo yokusabalalisa inethiwekhi yokwenziwa kwe-optical, esetshenziswa ekwakhiweni kwenethiwekhi ye-FTTx.
IJera-fiber factory inamandla angama-2500 square metres, inenqwaba yeyunithi yemishini ekhula unomphela.
Ifektri yeJera isebenza ngokuya nge-ISO 9001: 2015, lokhu kusivumela ukuthi sithengise emazweni angaphezu kuka-40 kanye nezifunda ezinjengeYurophu, i-CIS, iNingizimu neNyakatho Melika, iMiddle East, i-Afrika ne-Asia.
Ikhwalithi yemikhiqizo yakwaJera iqinisekisa ngokubambisana kwezinsiza ze-telecom namalabhorethri eqembu lesithathu ukuze yanelise imithethonqubo nezindinganiso zemakethe yendawo yamakhasimende ethu. Sihlola yonke imikhiqizo elabhorethri yasefektri ukwanelisa izidingo zendawo namazinga kazwelonke wamakhasimende ethu.
Siyethemba ukuhlangabezana nezidingo zethu zamakhasimende ngokuklanywa okulula kwemikhiqizo, intengo efanelekile, ikhwalithi ezethembayo, i-OEM eguquguqukayo kanye nensizakalo ye-R & D esheshayo.
Usuku ngalunye sithuthukisa uhla lwethu lomkhiqizo ukufeza izinselelo ezintsha zemakethe yomhlaba.
Uyemukelwa ukubambisana, inhloso yethu izibophezele ekwakheni ubudlelwane obunokwethenjelwa, besikhathi eside bebhizinisi ngentengo efanelekile, insizakalo ephelele kanye nesisombululo semikhiqizo ethembekile.